That's so good, right?: May 2009
Posted by Alex Aung at 12:50 PM No comments:
Eric ကတော့ထင်မှာပေါ့ Adam တစ်ယောက်အကြောက်အကန်ငြင်းမဲ့ပုံမဟုတ်ဘူး ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလည်း ပေါ့။ " Fine, ကျွန်တော့်ဒစ်ကို မထိဘူးလို့ကတိပေးရင်"လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောလိုက်တော့ Mark ခမျာ မျက်ခုံး တစ်ဖက်မြင့်တက်သွားကာ "ဘာကြောင်တာလည်းလို့" သူထင်ပုံရတယ်။ "Whatever," ဆိုပြီး သူ့လက်တွေ ဟာ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီက ကြယ်သီးတွေကို လှမ်းဖြုတ်တယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ရင်ထဲဖြန်းကနဲဖြစ်သွား ကာ သူ့လက်ကို လှမ်းဆွဲပြီးညှစ်လိုက်မိတယ်။ Mark လည်း "Do you promise?" ဆိုတဲ့စကားသံနှင့်အတူသူ့ လက်ကို လှမ်းဆွဲညှစ်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကို အံ့သြသွားပုံရပါရဲ့။ အင်း.....ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ဖြစ်နေ တာကို မယုံနိုင်တဲ့ပုံနဲ့ ကြည့်နေရင်း Mark က "Yes" ပြန်ဖြေပါစေလို့ Eric ဆုတောင်းနေကြောင်း သူ့မျက်လုံး ရွှန်းတောက်နေပုံက သက်သေခံနေပါ၏။
ပြေကျသွားတဲ့ဘောင်းဘီနှင့်အတူပေါ်လာတဲ့ တင်သားတွေကို တရှိုက်မက်မက်ကြည့်ရင်း "Sure, I promise," တဲ့ Mark တစ်ယောက်ရေငတ်သွားတယ်ထင်ပါ့။ "But we're doing this my way." Mark က ကျွန်တော့်ကို cabin ရဲ့အနောက်ဖက်ရှိ အိပ်ယာဆီဦးဆောင်ခေါ်သွားလေတော့ Eric ကလည်းလိုက်လာခဲ့တယ်။ အိပ်ယာ အနားရောက်တော့ Mark က Eric ကိုခပ်တိုးတိုး ဘာပြောလိုက်တယ်မသိဘူး cabin ခန်းရဲ့ အရှေ့ပိုင်းဆီ Eric ပြန်လှည့်သွားတော့တာဗျ။
"Strip" Mark ရဲ့ပြောသံကြားချိန်မတော့ ကျွန်တော်အ၀တ်တွေကိုဖြည်းဖြည်းချွတ်ရတာပေါ့ဗျာ။ အပေါ်အင်္ကျီ ချွတ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ ရင်အုပ်...ဘယ်လီကြွက်သားတွေ ပန်းသွေးရောင်နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို သူတို့စူးစိုက် ကြည့်လားကြည့်ရဲ့။ ပြီးတော့ ဘောင်းဘီကို ဆွဲအချွတ် ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ boxer brief ကိုမြင် တော့သူတို့မျက်ဝန်းတွေ အရောင်ပိုတောက်ပလာသလိုပါပဲ။ "Lay down," Mark ordered. ကျွန်တော် အိပ်ယာပေါ်ကိုအသာလှဲလျောင်းနေချိန်မှာ အသံမကြားရတာကြောင့်ခေါင်းကို ငဲ့ကြည့်လိုက်တာ Eric ကြိုး တစ်ခွေကို ကိုင်ပြီးဝင်လာတာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။" အား.....ဘာလုပ်မလို့လည်းဗျ။" "မင်းကိုချည်ဖို့လေ၊ အေးအေးသက်သာအချည်ခံပါကွာ၊ Don't worry, မင်းကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးမပြုစုဘူးလို့ ကတိပေးတယ်။"
"Fine." Eric ကကျွန်တော့် ခြေထောက်တွေကို အိပ်ယာအောက်ပိုင်းက ခုတင်တိုင်တွေမှာချည်နှောင်သလို Mark ကလည်း လက်မောင်းတွေကိုချည်ပြန်ပါရဲ့။ ခြေထောက်တွေ လက်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှား လို့ရအောင်ချည်ထားပေမဲ့ သူတို့ဖြေပေးမှ လွတ်ရမှာပါလေ။ Eric သူ့ငပဲကို ဂုတ်ကကိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ခပ်ဖြည်းဖြည်းသွင်းလိုက်တာ လည်ချောင်းထဲကိုရောက်ရော။ Mark တစ်ယောက်သူ့သူငယ်ချင်းနားလျှောက် လာပြီး သူငယ်ချင်းရဲ့နို့သီးခေါင်းတွေ ဗိုက်သားတွေကိုပွတ်သပ်ပြီး ပိုမိုထောင်အောင်ကူညီပေးတယ်။ ခဏ လေးကြာတော့ နှစ်ယောက်သားဒုံးပျံဖြစ်လာကြာတာ...အ..အာ။ Mark ကခပ်ကားကားဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့် ခြေထောက်ကြားမှာရပ်၊ lube တွေကိုလက်နဲ့အပြည့်ယူ သူ့ငပဲပေါ်လိမ်း၊ ပန်းသွေးရောင် ကျွန်တော့်အပေါက် လေးထဲ ရှန်တိန်လုပ်လိုက်သကိုး။
"MMMPH" ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ Eric ရဲ့ ပစ္စည်းရှိနေတာကြောင့် အသံကျယ်ကျယ်မအော်နိုင်ပေမဲ့ ခပ်တွန့်တွန့် ဖြစ်သွားရပြန်တာအမှန်။ Mark ရဲ့ကွမ်းသီးခေါင်းဟာ ကျွန်တော့် anus ထဲအောင်မြင်စွာ ၀င်သွားပြန်တာ ကြောင့်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပေါင်ကြားက မြွေဟောက်ကလည်း တဖြည်းဖြည်းမတ်လာတာ ဗိုက်သားတွေပေါ် ထောက်ကရော။ Mark အသွင်းအထုတ်ပြုလုပ်ရင်း ဒီအဖြစ်ကိုမြင်ကာ ကိုင်ဆွဲချင်ပုံပေါ်ပေမဲ့ ကတိကြောင့် ဘာမှမလုပ်မိပါ။ Eric ကျွန်တော့်လည်ချောင်းထဲနှဲ့သွင်းလိုက် အသွင်းအထုတ်ကစားလိုက်လုပ်တာကိုကြည့်ပြီး Mark ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေ."Fuck that mouth,"...တဲ့။ Eric သူ့သူငယ်ချင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်း "Oh yeah" ဆိုပဲ။ ရှည်ရှည်မျောမျောကြီး အတွင်းထဲလျောကနဲဝင်သွားလိုက် ထွက်သွားလိုက်နဲ့ ရင်ထဲဟာကနဲ.... ဟာကနဲပဲ ခံစားရတာ။ အဆုံးထိဝင်သွားချိန်မှာ Mark ကခါးကိုဇကောဝိုင်းလုပ်ပြန်တော့ ကျွန်တော့်မှာ ဖီးလ်..ပဲ။
Mark ရေဆာလောင်လာသလားမသိနှုတ်ခမ်းကို လျှာနဲ့သပ်သလို ဆောင့်ချက်တွေကလည်း ခပ်သွက်သွက်။ အသက်ရှူသံကလည်းပိုပြင်းလာတယ်။ "Fuck, I'm gonna blow all over him!" Mark လေသူ့ငပဲကိုဆွဲ ထုတ်ပြီး ကျွန်တော့်ညီဘွားကို ဗုံခေါက်သလိုခေါက်ရင်း stroking လုပ်တော့တာဗျ။ Eric လည်းကျွန်တော့် လည်ချောင်းထဲက ဆွဲထုတ်၊လက်နှင့်ကိုင်ထားရင်း အရသာခံကြည့်လေရဲ့။
"Fuck, yeah!" Mark အော်ညည်းသံနှင့်အတူ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ပေါ်ဖြန်းထည့်လိုက်တာ နို့သီးခေါင်းတွေပေါ် ပူပေါင်းလေးတွေထလို့။ "Ahhh" ဆိုပြီး ခပ်ဆတ်ဆတ်တုန်သွားတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ချွေးများသီးထလို့။ "That was great," သူ့ငပဲကို အသာကိုင်ရင်း ရေချိုးခန်းဘက်ထွက်ခွာသွား တယ်လေ။ ဒီအချိန်မှာ Eric က "My turn." ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားတွေထဲ ၀င်ရပ်လိုက်တာအတော်တုတ်တဲ့ သူ့ဟာကြောင့် လန့်များပင်လန့် မိတော့တယ်။ သူ့ကိုဖြေးဖြေးသက်သာလုပ်ဖို့ပြောပေမဲ့ သူ့ဟာကြီးကို နှဲ့နှဲ့သွင်းတာ အ၀ကျင်းတဲ့ ပုလင်းထဲ အ၀တ်စထိုးထည့်နေသလိုပါပဲ။ ချောဆီထပ်ထည့်ပြီး အထုတ်အသွင်းလုပ်ချိန်မတော့ "Ohhhhh" ကျွန်တော် ဘာဖြစ်သွားပါသလဲ။ "Yeah, take my big cock" "Your tight ass feels so good. Do you like my cock in your ass?" ဘာများပြန်ပြောရမှာလည်းဗျာ။ "Ye Eric ah!" လို့ခပ်တိုးတိုးသာပြန်ပြောနိုင်တာ။ Eric ရဲ့ ရွှေလီးက နာကျင်မှုတွေဖြစ်စေသလို ကျေနပ်အရသာရှိတာကို တကိုယ်လုံးလှုပ်ရှားမိစေတဲ့အထိပါ။ "Fuck it." လိုချင်တယ် ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ချက်။
တင်းရင်းပြီးလုံးနေတဲ့ တင်သားတွေကို ကိုင်သူ့ဒစ်ကိုနှဲ့နှဲ့သွင်းပြီးဆောင့်။ "You're so tight," Eric described. အား....အ အဆုံးထိဖြည်းဖြည်းသွင်း ရင်းနှဲ့နေတာ ရင်ထဲ ဖီးလ်ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းမသိပါဘူး။ Mark လိုဆောင့် ချက်ပြင်းပြင်းမဟုတ်ဘဲ ဇိမ်နဲ့မွှေနေရောလေ။ "ရှီး....you want me to blow my hot load?" "Yeah" ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးပြုပြီး တခြားလူပျော်ရွှင်နေတာကိုစောင့်ကြည့်ရတာဟာလည်း စိတ်အာရုံမှာတမျိုး ကောင်း။ Eric သူ့ငပဲခပ်ကြီးကြီးကို ဖြည်းဖြည်းဆွဲထုတ်တာ ဖင်သားတွေတလျှောက်... တစိမ့်စိမ့်ဖီးလ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းကအ၀နား အရောက်မှာ ကျွန်တော်တစ်ချက်ညှစ်ပေးမိတော့ "Fuck!"လို့ သူ့ခမျာအော်ပြီး အမြန်ဆွဲထုတ်ပြီး ပန်းလိုက်တာကျွန်တော့် ဗိုက်သားပြင်ပေါ် ပြီးတော့ လည်ပင်း တွေတောင် ပေသွားရင်း ရင်ဘတ်ပေါ်က Mark ရဲ့ရွှေရည်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းသွားပါရောလေ။ သူ့ရဲ့လရည် နောက်ဆုံးတစ်စက် ကို ညှစ်ထုတ်ရမ်းခါရင်း "Fuck that was good." ငါ့ကောင် သန့်ရှင်းရေးသွား လုပ်လိုက် ဦးမယ်၊ Mark ကိုပြောလိုက်မယ် မင်းအတွက်တဘက်တစ်ထည်ပေးဖို့။" သူအခန်းထဲကထထွက် အသွား ခုတင်ပေါ်က ထထိုင်ဖို့အလုပ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုးတုတ်ခံထားရမှန်း သတိရမိတော့တယ်။ ခဏနေ တုန်းကတော့ ဘယ်လိုမှ မခံစားမိပေမဲ့ အခုတော့ရင်ဘတ်နှင့် လည်ပင်းပေါ်က ဒီလူတွေရဲ့ အရည်တွေက စီးကပ်ကပ်နဲ့ နေရတာဒုက္ခရောက်လိုက်တာ။
"ဟေး" ဟော Mark တစ်ယောက် အခန်းထဲဝင်လာပြီ။ အပြာနုရောင်တဘက်တစ်ထည် လက်မှာကိုင်ဆွဲရင်း boxer ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ဆံပင်ခပ်ပွပွရေချိုးပြီးစ ပုံစံနဲ့ သူအတော်ကြည့်ကောင်းတာပဲ။ ရေစိုတဘက်နဲ့ ကျွန်တော့်ဗိုက်သား၊ရင်ဘတ်နှင့် လည်ပင်းပေါ်ကဟာတွေကို သန့်စင်ပေးတာ ငြင်ငြင်သာသာပေါ့။ ဘာစိတ်ကူး ပေါက်လာသလဲမသိ ကျွန်တော့်ပေါင်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်တာ။ "Don't" "What?" "I told you, I'm not gay. I don't get off with guys." "You're fucking hard!" လို့ Mark မယုံမကြည်နဲ့ပြောတော့တာ။ ကျွန်တော့်နားကထပြီး တံခါးဆီသို့လှမ်းသွားကာပါးစပ်ကလည်း "Anyone would be, after what you two did." "Unbelievable" သူဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော့်သိစိတ်ကတော့ တားနေဦးမှာပဲ။ အကြောင်းပြချက်က မခိုင်မာပေမဲ့ သူတို့ကို မထိမကိုင်စေချင်တာတော့ အမှန်ဗျ။ ဟေ့လူကြိုးဖြေပေးသွားဦးလေလို့အော်လိုက်ပေမဲ့ ဒေါသဖြစ်နေသလား ဘာမကျေမနပ်ဖြစ်သလဲမသိ Mark ကတံခါးနားကလှည့်ကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုပြော လိုက်တာများ "Fuck you."
ပြီးတော့ တံခါးကိုပိတ်ချသွားလိုက်တာခေါ်မကြားအော်မကြား။လက်မှာချည်ထားတဲ့ ကြိုးတွေလွတ်လိုလွတ်ငြား ကြိုးစား မိတာအကြိမ်ကြိမ်။ဒါပေမဲ့ မောပန်းပြီးချွေးရွှဲရုံကလွဲလို့အသုံးမကျပါဘူးလေ။ ခဏလေးကြာတော့ မောပန်းတာတွေရော ဆာလောင်တာတွေရောနဲ့ အိပ်မောကျသွားရတာ။ မပီမသ၀ိုးတ၀ါးနှုတ်ဆက်သံတွေကြား တော့မှ ကျွန်တော်နိုးထလာခဲ့တယ်။ Eric နဲ့ Mark ကနှုတ်ဆက်ြ့ပီးပြန်သွားကြတာပဲ။ cabin တံခါးပိတ်သံကို ကြားမိတော့ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို အမှတ်တမဲ့ငုံ့ကြည့်မိတာ ၆လက်မကျော်မာထောင်နေတာ ချစ်စရာလေးဗျ။
ကျွန်တော်သိနေတယ် ထောင်ထနေတဲ့ ညီဘွားနှင့်အတူ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ဒီပုံစံနဲ့ Sean မြင်တွေ့သွားရင် သူ့အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာကိုလေ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကိုထားပြီးပြန်မသွားဘူးဆိုတာသိရသေးလို့ ရင်ထဲငြိမ်သွားရတာတော့ အမှန်။ တွေးနေတဲ့အတွေးစတောင်မဆုံးသေးဘူး အခန်းထဲဝင်လာတာ...။ ရေချိုးခန်းတဘက်လေးကို ခါးမှာချိတ်ရုံလေးဝတ်လာတာ။ သူ့ဆံပင်တွေက ရေစိုလျက်၊ရေစက်ကလေးတွေက သူ့ရင်အုပ်ကျယ်ပေါ်တလိမ့်လိမ့်ကျဆင်းနေလျက်။ "Hey" သူ့ကိုကျွန်တော့်အဖြစ်တွေရှင်းပြဖို့ကြိုးစားတော့ Seanက "Eric told me, no need to explain." တဲ့သိပြီးလို့သွေးအေးသွားတဲ့ လေသံနဲ့လေပြောပါတယ်။
အစ်မယောက်ျားဆိုတဲ့အသိနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေမိတာ။ သူခုတင်နားလှမ်းလာပြီးစကားတွေဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ နားထောင်သမားသက်သက်ပေါ့။ stripper ကအရမ်းမိုက်ပါသတဲ့။ ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကို သူလက်မထပ်ခင် လုပ်မယ်လို့ အမြဲတွေးတောခဲ့တာ။ အခု Eric, Mark နဲ့ သူတို့ နည်းနည်းလွတ်သွား ခဲ့ကြတာဆိုပဲ။ ငါတို့သုံး ယောက်က ဘော်ဒါတွေဆိုတော့ အချင်းချင်းစည်းစောင့်ရတာပေါ့ကွာတဲ့လေ။ကျွန်တော် သူပြောနေတာကို နားထောင်ရင်း သူ့ရဲ့ရွေ့လျားလုပ်ဆောင်ပုံတွေကိုမြင်ရတာ Mark တို့နဲ့တုန်းကလို ခံစားလာမိရတယ်။ ထိတ်လန့်တာလား တောင့်တာတာလား ရောထွေးနေတဲ့ ခံစားချက်ပေါ့။
Sean ကြမ်းပြင်ပေါ်က lube ကိုကောက်ကိုင်လိုက်ရင်း သူလုပ်စရာရှိတာကိုဆက်လုပ်နေပြန်ရဲ့။ "Lauren ဆိုတဲ့မင်းအစ်မနဲ့ sex လုပ်ရတာလည်းကောင်းပါ့။ အား.....ချောဆီတွေလက်ထဲညှစ်ထဲ့ရင်း အနည်းငယ်မာ နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲပေါ် သုတ်လိမ်းလိုက်တာ အံ့အားသင့်သွားရပေါ့။ "သူကျွန်တော့ညီဘွားကို sucking ကောင်းကောင်းပေးတယ်၊ ပြီးတော့ great pussy ပါ။ဒါပေမဲ့ နောက်ဖက်က တံခါးကိုတော့ သူခေါက်ခွင့်မပြုဘူး ကိုယ့်ကို။"
"But" Sean explained. ကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုသူ့တဘက်ကိုလျောချလိုက်တာ ၇လက်မနီးပါးရှိတဲ့ အမြှောက်ကြီး ကတန်းနေတာ ကျွန်တော့်ဆီ။ ငါ့ asshole ကို လီးတစ်ချောင်းလုံးသွင်းတဲ့ခံစားမှုကိုလည်း အရသာခံချင်သေး တာကွ။" "I'm not gay," ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ကာကွယ်လို့ရလိုရငြား။ ဒါပေမဲ့ Sean ခုတင်ပေါ်လှမ်း တက်တယ် ကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ "Guys don't get me off." လို့ပြောလည်းမရ တော့ပါ။
"Ohhh....." Sean moaned. ကျွန်တော့်ဒစ်ကို ကိုင်ပြီးတော့အသာထိုင်ချရင်းလေ။ "Fuck!" "OH" သူ့ရဲ့ခပ် ကျဉ်းကျဉ်း ass က ကျွန်တော့်အတံရဲ့အဆုံးထိလျောကနဲ ဆိုက်ကျသွားတာ"so...good." အိပ်ယာကို လက်အသာထောက်အားယူက ဖင်ကိုအသာပြန်ကြွကာ....အိုးအဆက်မပြတ်ဆောင့်တော့ တာ တဘန်းဘန်း ကိုဖြစ်ရော့။ ကျွန်တော်လည်း ဖင်ကိုမသိမသာကြွလီးကိုကော့ထားပေးရင်း အရသာခံမိတာ ပိုဂွတ်သလိုပဲ။
ဘယ်အရသာကပိုကောင်းသလည်း ခံရတာကကောင်းသလား အခုလိုချရတာကကောင်းသလား မဆုံးဖြတ် တတ်တော့ပါဘူး။ Sean ရဲ့ tight ass ကရော၊ အပေါ်က တက်ဆောင့်နေချိန်မှာ တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့ Sean ရဲ့ရွှေလီးကရော စိတ်ကိုပိုမိုကြွစေသလားမသိ။ ကျွန်တော်သိတယ် သိပ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး မကြာခင် ပြီးတော့မယ်ဆိုတာကို။ ညကတည်းက လချောင်းထဲမှာ လရည်တွေနဲ့ပြည့်နေတာ လွှတ်ရန်အသင့်။ Sean ရဲ့ ကျပ်ကျပ်သိပ်သိပ် ass က အရသားကောင်းပေးနေတာ၊ အပေါ်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းကြွလိုက် ဖိလိုက်လုပ်နေ တာ...အိုး...ရှီး။ အဆုံးထိထိုင်ပြီးချိန်မတော့ ပြန်မကြွတော့ဘဲနှဲ့နေတာ...အိုး။ "I'm going to cum, I'm going to cum." ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ဘူးလေ။ Sean ဖင်ကိုအသာကြွ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ လှဲလျောင်းရင်း ညီဘွားကို သူ့ညာလက်နဲ့တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တာ"Oh..fuck." လေထဲကို ပန်းထုတ် လိုက်မိတော့ ရေပြွတ်က ရေတွေပန်းထုတ်သလို ကြည့်လို့တော့အကောင်းသား။ ဟာ..ဟ သူ့ရင်ဘတ်နဲ့ ဗိုက်တွေပေါ်ကို ကျသွားတော့ သူ့ခမျာ "Fuck." ပဲပြောနိုင်တော့တယ်။ ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံးလည်း ချွေးတွေ ရွှဲနစ်နေရင်း အပြေးပြိုင်ပွဲပန်းဝင်လာသူလို အသက်လုရှူနေရင်း "That felt good." လို့ပြောမိရတော့တာပေါ့။ ကျွန်တော့်လက်ကောက်ဝတ်တွေ၊ခြေချင်းဝတ်က ကြိုးတွေကိုဖြေပေးအပြီး အိပ်ယာဘေးကိုပြန်လျှောက်လာ ကာ "Definitely." တဲ့။
လူတစ်ယောက်အပေါ်အထင်သေးစိတ်မရှိတာ၊နှစ်လိုဖွယ်အပြုံး၊နွေးထွေးတဲ့ပြုစုမှုတွေကြောင့် သူဟာကျွန်တော့် အမြင်ထဲမှာ လူတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြန်ပေါ့။ "I guess I see what my sister loves about you."
နှစ်ဦးသားဘေးချင်းယှဉ်အိပ်ရင်း ရှေ့စခန်းဘယ်လိုသွားဖြစ်ကြမယ် မသိပေမဲ့ Seanရဲ့" From what Eric had to say, I guess certain skills run in the family." ဆိုတဲ့ဖြည့်စွက်စကားကြောင့်နှစ်ဦးသား နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးလိုက်မိကြပါတော့တယ်။ သူ့ရဲ့လူပျိုညလေးမှာကျွန်တော် အပြုံးတွေဝေခဲ့ရပေါ့လေ။
Posted by Alex Aung at 4:48 PM 1 comment:
အရာအားလုံးဟာ သဘာဝကို လွန်ဆန်ဖို့ မလွယ်ကူဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်အစကတည်းက ယုံကြည်
ပြီးသားပါ။ လွန်ဆန်ဖို့လည်း ဘယ်တုန်းကမှ မကြိုးစားခဲ့။ ဒါပေမယ့် ခုလိုအဖြစ်မျိုးကိုတော့ မမျှော်လင့်
စတိတ်ကျောင်းတစ်လျှောက် သူအချစ်ဆုံးက ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသလို တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လည်း
ခုမှ ဘာကြောင့်များ....။ ကျွန်တော်ပေးတဲ့အချစ်တွေက သူ့အတွက် မလုံလောက်တော့လို့လား။ ကျွန်တော်
မသိဘဲ သူဘယ်တုန်းက တခြားကောင်မလေးတွေနဲ့ ရှုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာလဲ။
ဟိုတစ်နေ့က မမျှော်လင့်ဘဲတည့်တည့်တိုးမိတော့မှသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်အဆင့်ကို ကျွန်တော်
" ဒါ....ကိုယ့်ချစ်သူလေ။" ကျွန်တော့်မျက်လုံးကို ရင်ဆိုင်ကြည့်ရင်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အကြည့်တွေ
ထဲမှာ အားနာတာတွေရော၊ ဂုဏ်ယူနေတဲ့အကြည့်မျိုးတွေ ရောယှက်ပါဝင်နေသလို ကျွန်တော်ခံစားရ
အဲဒီ့ကောင်မလေးက သူ့ရဲ့ချစ်သူဆိုရင် ငါကဘာလဲ။ အဆက်မပြတ်ဝင်လာတဲ့ အတွေးတွေက ကျွန်တော်နဲ့
သူတို့အကြား ဆက်ဆံရေးကို ပုံမှန်ထက် မာထန်အောင် တွန်းပို့ပေးနေသလိုပင်။
ရက်စက်လိုက်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်ပဲ။ သူငယ်ချင်းတဲ့လား။တက္ကသိုလ်တစ်လျှောက်လုံး သူငယ်ချင်းအသစ်
တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါ တွေမှာတောင် ကျွန်တော်က သူ့ရဲ့ချစ်ချစ်၊ ဒါမှမဟုတ် အချစ်ဆုံးလို့သာ
ပြောလေ့ရှိခဲ့တဲ့ သူက ခုတော့အပြောင်းအလဲကြီး ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားက အသုံးအနှုန်း၊အခေါ်အဝေါ်တွေကိုတော့ သူ ဆက်သုံးစွဲနေ
ဆဲပင်။ "ကို"...။ အဲ့ဒါ သူ့အတွက် ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ နာမည်ပေါ့။ သူက ကျွန်တော့်ထက်နည်းနည်း
ကြီးတာကြောင့် ချစ်စနိုးနဲ့ ဒီနာမည်လေးကိုရွေးချယ်ပေး ခဲ့သည်။ ခုတော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းသာ
ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ ဒီနာမည်လေးက သူ့ရဲ့ချစ်သူခေါ်ဆိုဖို့ နာမည်ဖြစ်သွားတာ စိတ်မကောင်းစရာ။
ခက်တော့ခက်သား။ ကျွန်တော့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေက သူ့အပေါ်ကိုသာ ခုချိန်ထိ တိမ်းညွှတ်မိ
သူနဲ့ ကျွန်တော် စတင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းတုန်းက အချိန်တွေကို ပြန်တွေးမိတိုင်း သူ့ကို လက်ခံကြို
ဆိုခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ဘာသာ ကျွန်တော် ခုအပြစ်တင်နေမိပြီ။
"ဟေ့ကောင်....မင်းကို ဟိုကောင်လေးက စာပေးခိုင်းလို့....."။ နားမလည် ပါးမလည်နဲ့ သူငယ်ချင်း
ကောင်လေးယူလာပေးတဲ့ စာကိုဖွင့်ဖတ်ကြည့်တော့ သူ့ရဲ့အချစ်တော်လုပ်ဖို့ပြောတဲ့စာ။ စာထဲမှာ
ကျွန်တော့်ကို သူဘယ်လောက်ကြွေကြောင်း၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ အချစ်ဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ကြောင်း
သူနဲ့ သိကျွမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း အချိန်တွေမှာတော့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တိုးလာခဲ့သည်မို့
ပျော်ရွှင်ခဲ့တာကလွဲရင် နှစ်ဦးသား သံယောဇဉ်က ဘာမှအပြောင်းအလဲမရှိခဲ့။
ဆယ်တန်းအောင်ပြီး နှစ်ဦးသားတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ရောက်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲက အပြီးအပိုင်
နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတဲ့ ဖခင်ကြောင့် သူဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ မသိမသာအရေးပါလာခဲ့သလို
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်း သံယောဇဉ်ပိုတွယ်လာခဲ့ ကြသည်။
ကျွန်တော် အားငယ်ချိန်တွေတိုင်း အားပေးတတ်တဲ့ သူက ကျွန်တော် ဒုက္ခပေါင်းများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့
ချိန်တိုင်းလည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီဖြေရှင်းပေးတတ်ပြန်သည်။
စားအတူ၊သွားအတူ အချိန်တိုင်းနီးပါး အတူရှိခဲ့ကြတဲ့ အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေက ကျွန်တော့်အတွက်တော့
တကယ့်ကိုကြည်နူးစရာပင်။ အသက်တွေကြီးရင့်လာတဲ့အထိ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အခက်အခဲမှန်သမျှ
အတူလက်တွဲရင်ဆိုင်သွားကြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသလို ရည်းစားမထားကြေး၊ မိန်းမမယူကြေးဆိုပြီးတော့တောင်
အဲဒီ့စကားကြောင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က မိန်းမစိတ်ဝင်နေသူလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် စလုံး သဘာဝကိုဆန့်ကျင်ဖို့ လုံးလုံးစိတ်မကူးခဲ့။ ဒါပေမယ့်....။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲသူ့ကို တစ်ဘ၀လုံးအချစ်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားချင်ခဲ့သည်။ကျွန်တော့်အပေါ်
တစ်သက်လုံးနားလည်ပေး စေချင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဘေးအနားမှာလည်း အမြဲရှိစေချင်ခဲ့သည်။ အဲ့ဒီလို
သဘာဝကို လွန်ဆန်တဲ့ အတွေးတွေကတော့ ခုထက်ထိပင် ကျွန်တော့ဦးနှောက်ထဲမှာ နေရာယူထားဆဲ။
"နင်ဘယ်အချိန်ကတည်းက...." မေးခွန်းက ကျွန်တော့်နှုတ်ဖျားမှာ တစ်တစ်ဆို့ဆို့ကြီး။ "အဲဒီကောင်မလေး
နဲ့ ဘယ်အချိန်ကတည်းက.."။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုဆက်မေးရမှန်းမသိတော့။ ကျွန်တော်တို့ မျက်နှာချင်း
ဆိုင်ဆုံပြီး နောက်တစ်ရက် သူ့ဆီ အရဲစွန့် ဖုန်းဆက်ကြည့်မိသည်။
ကျွန်တော် ဖုန်းခွက်ကို လွတ်မကျအောင် ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ရင်း နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခု ထုတ်လိုက်
"မင်း ဘယ်အချိန်ကတည်းက ငါ့ကို သစ္စာဖောက်နေခဲ့တာလဲ။"
ကျွန်တော့်မေးခွန်းဆုံးတော့ သူ့ဆီက ရယ်သံသဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရသည်။ အဲဒီလိုခနဲ့သလိုလို၊ အနိုင်ပိုင်းသလို
လို ရယ်သံမျိုးကို ကျွန်တော်မုန်းသည်။ ရယ်သံတစ်ဝက်နဲ့ သူဆက်ပြောသွားတာက " ငါတို့က သဘာဝကို
လွန်ဆန်လို့မှ မရတာ၊ ငါ့ဘ၀ရှေ့ရေးအတွက် ငါ့နောင်ရေးအတွက် သူမကိုချစ်ခဲ့တာ။ မင်းကိုချစ်တာနဲ့
မတူဘူးလေ။ မင်းကိုလည်း ငါချစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့။ ပါတနာတစ်ယောက် အနေ
နဲ့ပေါ့...။သူ့ကိုတော့......ငါတဖြည်းဖြည်း နားလည်လာတယ်၊ အစားထိုးလို့မရဘူးဆိုတာ...။"
သူကိုယ်တိုင်က ဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောလာခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော်အံ့သြရသည်။ ကျွန်တော် ခံစားချက်တွေကို
နားအလည်ဆုံး သူကိုယ်တိုင်ကပင် ဒီလို......။
ကြိုးစားခဲ့မိသလား။ နားကိုပိတ်၊ ခေါင်းကို ခါရမ်းမိလိုက် ပေမယ့် အာရုံထဲမှာတော့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်အထိအတွေ့
တွေကိုသာ မြင်ယောင်လာမိပြန်ပါသည်။" ငါတကယ်လို့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်သွားလည်း
ဘာဖြစ်လည်း။အိမ်ထောင်ဖောက်ပြန်တာမှမဟုတ်တာ ငါတို့ဆက်ချစ်သွားလို့လည်း ရတာပ.ဲ ..."...အား...
ကျွန်တော်ကျိန်ပြောရဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှ သဘာဝကိုဆန့်ကျင်လိုစိတ် ဆန့်ကျင်ဖို့
မကြိုးစားခဲ့ပါ။ အကယ်၍သူ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်က သဘာဝကို ဆန့်ကျင်တဲ့အရာပါလို့
ဆိုပါရင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ သဘာဝကို ဆန့်ကျင်ဖို့ အခါပေါင်းများစွာ ကြိုးစားအားထုတ်နေသူ
တစ်ဦးအဖြစ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သတ်မှတ်ရပေတော့မည်။
Ref: မေသော် - ကျွန်မချစ်သော“သူမ”
Posted by Alex Aung at 11:04 PM3comments:
သင်ဟာများသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဂျီစပေါ့ကို လေ့လာဖို့အချိန်ပမာဏတစ်ခုထိတော့ ကြိုးစားမိခဲ့ မယ်ထင်တယ်။ ဘယ်လိုရှာဖွေရမယ်၊ ဘယ်လိုနှိုးဆွရမယ်၊အမျိုးသမီးတစ်ယောက် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ခလုပ်နှိပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ ဘာကြောင့်အမျိုးသားအများစုဟာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် male G-spot တွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်ဖို့ဝေးနေရတာပါလိမ့်။ That’s right, သင်တို့ထဲက တစ်ချို့ဟာ အံ့အားတသင့်ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ Prostaste ဟုတ်တယ် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဂျီစပေါ့နဲ့ အတူညီဆုံးနေရာအကြောင်းသင်ယူလေ့လာ ဖို့ကို နည်းလမ်းတွေဟာ သင့်အတွက် အဲဒီဧရိယာကိုရှာဖွေစူးစမ်းဖို့ ဟုတ်တယ် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဂျီစပေါ့နဲ့ အတူညီဆုံးနေရာအကြောင်းသင်ယူလေ့လာဖို့ကို နည်းလမ်းတွေဟာ သင့်အတွက် အဲဒီဧရိယာကိုရှာဖွေစူးစမ်းဖို့ taboo ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောက်ပါဆောင်းပါးကို ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့စိတ်သဘောထားအမြင်နဲ့ ဖတ်မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အကြံဥာဏ်များဟာ သင်အမြဲတမ်းမျှော်လင့်စောင့်စားမိတဲ့ ဘ၀မှာအကောင်းဆုံးဆို တဲ့ orgasms ဆီကိုဦးဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းဒီနည်းလမ်းဖြင့် ကျေနပ်မှုတစ်ခုကို သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စွာ ချက်ခြင်းလုပ်ဆောင် နိုင်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားပေမဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေချင်တာကတော့ ဒီရှာဖွေခြင်းနှိုးဆွခြင်း နည်းလမ်းဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ Male G-spot ဟာ powerful gland တစ်ခုဖြစ်သလို အဲဒီအရာက ကမ္ဘာကြီးလှုပ်ရမ်းသွားသလို ခံစားရတဲ့ orgasms ဆီ ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ကြောင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်တာကတော့ “အရသာထူး”လို့ လူတိုင်းက အမည်ပေးကြမယ်ဆိုတာကိုပေါ့။ တကယ်လို့သင်ဟာ ဒီလို အရသာကို ဖွေရှာဖို့ အသင့်မဖြစ်သေး ဘူးဆိုရင်လည်း နှိုးဆွရှာဖွေဖြင်း၊နည်းလမ်းဟာ နားလည်နိုင်တဲ့အရာပါ။ ပြီးတော့ သင့်ရွေးချယ်မှု ခံစားမှုအမှန်တရားကို တစ်ခုခုနဲ့ ပြောင်းလဲဖို့ ကျွန်တော်တို့ မပြုလုပ်လိုပါဘူး။ အကယ်၍ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ သင်ဟာ male G-spot stimulation အတွက် open minded ဖြစ်သူဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ စတင်အလုပ်လုပ်ဖို့အားပေးပါရစေ။ လူတိုင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပြည့်စုံမှု orgasm ဆီသို့ ဖော်ဆောင်ပေးမဲ့လမ်းကြောင်းပါလို့။
Posted by Alex Aung at 5:59 PM No comments: